Warar: Oct 25, 2007
Wararkii ugu dambeeyey ee Siyaasadda ka jirta Baydhabo
Weeraro kale oo lala beegsaday Dekedda weyn e magaaladda Muqdisho.
C/llaahi Yuusuf iyo Sheekh Aadan Madoobe oo la filayo in ay u dhoofaan sucuudiga
Itoobiya oo lagu cadaadinayo in ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya ..
Geedi oo si deg deg ah ugu ambabaxay dalaka Itoobiya ka dib markii…
Dowladda Mareykanka oo qoraal soo direy wadanka Itoobiya…
Ciidamada Booliiska iyo kuwa Milatariga oo isaga soo horjeeda..
Xulka qaranka oo kulan tijaabo ah beri la la yeelanayo Kooxda…
Iyadoo weli uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf iyo Ra'isul Wasaaraha DFKMG Cali Max'ed Geedi, ayaa waraka ka imaanaya Magaalada Baydhabo sheegayaan in laga yaabo in dib loo dhigo kulankii ka dhici lahaa Magaalada Baydhabo oo ay isugu imaan lahaayeen Baarlamaanka kaas oo cod loogu qaadi lahaa Dowladda Cali Max'ed Geedi.
Ra'isul Wasaaraha DFKMG Geedi labo fursadood ayuu haystaa oo ku saabsan dowladdiisa, midda hore waxaa baarlamaanka marka hore weydiinayaa in Dowladda Cali Max'ed Geedi sii shaqeyso iyo in aysan shaqeynin, haddii baarlamaanklu isku raaco in ay sii shaqeyso, Ra'isul Wasaaraha DFKMG Geedi waxa uu ka helayaa guul weyn, haddii la yiraahdo 'Dowladdu ma sii shaqeyn karto oo waqtigeedii waa uu dhamaaday' waxaana halkaasi ka soo baxeysa fursad kale oo la xiriirta in moowshin la hor dhigo baarlamaanka oo cod loogu qaadayo Xukummadda uu Cali Max'ed Geedi hogaamiyo, haddii 'maya' uu yiraahdo baarlamaanku waxaa halkaasi ku soo gebagaboobeysa Cali Max'ed, haddii haa la yirahdna mar kale ayuu ra'isul Wasaaraha DFKMG Geedi soo dhisi doonaa xukuumad.
Ra'isul Wasaaraha DFKMG Cali Max'ed shalay ayuu ka ambabaxay magaalada Baydhabo, isagoo u sii jeeda magaalada Adis-Ababa ee dalka Itoobiya, oo kula kulmi doono xubno ka tirsan Dowladda Itoobiya iyo safaraadaha ku sugan magaalada Adis-Ababa, hase yeeshee warar ayaa waxay sheegayaan in marka uu dhamysto safarka Itoobiya uu Ra'isul Wasaaraha DFKMG Geedi u duuli doono dalka Sucuudi Carabiya oo la filayo in dhawaan ay gaaraan madaxweynaha dowladda Federaalka C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe, waxayna wararku sheegayaan in dowladda Sucuudiga ay dooneyso in ay dhameyso khilaafka u dhexeeya labada mas'uul.
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in manta laga yaabo in Baarlamaanku uu kulan isugu yimaado si cod loogu qaado Dowladda Cali Max'ed Geedi.
Duqeyntii labaad ayaa lala beegsaday dekedda weyn ee Magaalada Muqdisho oo ay weli ka socoto hawlo la xiriir dejin iyo dhoofin, waxaaa shalay subax weerarar hoobiyayaal ah lagu qaaday dekedda, waxaana la sheegay in ay waxyeelo ka soo gaartay dad ka deganaa degaanaa ku dhow dhow dekedda.
Habeen hore ayay ahayd markii weerar hoobiyayaal ah lagu qaaday dekedda laguna dhiftay ilaa iyo 13 hoobiye oo la sheegay in ay waxyeelo ka soo gaartay ciidamad Uganda iyo kuwa Dowladd Federaalka.
Weeraradaani ayaa waxay ku soo beegmeen xili uu khilaaf xoogani u dhexeeyo Madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf iyo Ra'isul Wasaaraha DFKMG Cali Max'ed Geedi, sidoo kale, waxaa sii xoogeystay weerarada lagu hayo ciidamada Dowladda Federalka iyo kuwa Itoobiya, waxaana shalay dhacay dhowr weerar oo lagu qaaday ciidamada Dowladda Federaalka, kuwaas oo gaystay khasaarooyin, waxaana aad u kacsan xaaladda magaalada, iyadoo dadkoo dhami u dheg taagayaan waxa ka soo yeeri doona Magaalada Baydhabo.
Madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Sheekh Aadan Max'ed Nuur (Madoobe) ayaa la filayaa in saacadaha soo socda u ambabaxaan dalka Sucuudi Carabiya, kadib markii ay martiqaad ka heleen Dowladda wadanka Sucuudi Carabiya, inkastoo aan la faahfaahin waxa uu ku saabsan yahay safarkaani, haddana warar ayaa waxay sheegayaan in boqortooyada Sucuudi Carabiya ay dooneyso in ay dhex dhexaadiso Madaxweynaha iyo Ra'isul Wasaaraha.
Warar kale ayaa waxay sheegayaan in C/llaahi Yuusuf iyo Sheekh Aadan Madoobey ay halkaasi u tagayaan sidii ay uga heli lahaayeen dhaqaale, hase yeeshee dhaqaalihii ay horey u bixisay Sucuudiga ayaa qayb ka ah khilaafka haatan u dhexeeya Madaxweynaha iyo Ra'isul Wasaaraha.
Dowladda Sucuudiga waxa ay kal hore Ra'isul Wasaaraha DFKMG Cali Max'ed Geedi gacanta u gelisay lacag gaareysa 35-milyan oo Doolar, waxaana bixinta lacagtaasi si weyn uga carooday Madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf.
Wararka ka imaanaya Magaalada Adis-Ababa waxay sheegayaan in deegaano ka tirsan wadanka Itoobiya ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Itoobiya, sidoo kale kooxaha mucaaradka ee aan la dhacsaneyn siyaasadda Ra'isul Wasaaraha itoobiya Meles Zenawi ayaa waxay ka dalbadeen dowladda wadankaasi in ay si dhaqsi leh uga soo saarto ciidamadeeda gudaha dalka Soomaaliya.
Banaanbaxyadaan iyo wararka ka soo yeeraya mucaaradka waxay muujinyaan sida Itoobiya loogu cadadinayo in ay ciidamadeeda kala soo baxdo gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo kooxaha mucaaradka dhawaan ay sheegeen in Magaalada Muqdisho ku dhimanayaan ciidamo ka tirsan Itoobiyabaarlamaanku codkaasi qaadi doono
Safar aan la fileyn ayaa waxaa maalintii shalay ahayd ugu ambabaxay dalka Itoobiya Ra'isu Wasaaraha DFKMG Cali Max'ed Geedi, kadib markii sida la sheegay uu martiqaad ka helay wadanka Itoobiya.
Safarkaan ayaa waxa uu yimid kadib markii dowladda Itoobiya ay walaac weyn ka muujisay khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha iyo Ra'isul wasaaraha, iyadoo dowladda Itoobiya ay dhowr jeer ku guuldareysatay in ay dhex dhexaadiso Madaxweynaha iyo Ra'isu Wasaaraha, waxa uuna safarkaani yahay midkii labaad oo uu Ra'isul Wasaaruhu ku tagayo dalka Itoobiya, iyadoo kii hore aysan ka soo bixin wax natiijo ah oo la xiriira dhameynta khilaafka ka dhex taagan mas'uuliyiinta Dowladda.
Dowladda Itoobiya indhaha ayay ka fiirsneysa xaaladda ka dhex taagan madaxweynaha iyo Ra'isul Wasaaraha, waayo marka uu khilaaf soo kala dhex galo mas'uuliyiinta Dowaldda waxaa xalin jiray Dowladda Itoobiya, balse haatan waxay dowladda Itoobiya u muuqataa mid aan indhaheeda u soo jeedin khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha iyo Ra'isul Wasaaraha.
Dhawaan ayay ahayd markii Wasiirka dalxiiska Itoobiya Maxamuud Dirir uu ku guuldareystay xalinta khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha iyo Ra'isul Wasaaraha mar uu yimid Magalada Baydhabo, sidoo kale beesha Caalamka ayaan weli soo faragelin khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha DFKMG C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Ra'isul Wasaaraha DFKMG Cali Max'ed Geedi.
Dowladd Mareykanka ayaa waxay qoraal soo gaarsiisay Itoobiya oo ay kaga dalbaneyso in ay si dhaqsi leh u soo gebagabeyso khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha iyo Ra'isul wasaaraha Dfkmg, hase yeeshee Dowladda Itoobiya kama aysan jawaabin qoraalkaasi sida aanu ku heleyno warar ka imaanaya Magaalada Adis-Ababa.
Itoobiya ayaa waxa ay si aad ah kal hore uga carootay markii kongareeska Mareykanka uu isku raacay in cunaqabateyn la saaro Itoobiya dhaqaalihii uu Mareykanku siin jirayna laga joojiyoy, taas oo la sheegay in ay keentay in Dowladda Itoobiya dhegaha ka xirato codsiga ka yimid Dowladda Mareykanka ee la xiriira Madaxweynaha iyo Ra'isul Wasaaraha Dowladda Federaalka.
Dowladda Mareykanka ayaa Itoobiya ku eedeeysay in maamulka Meles Zenawi uu ku xadgudbay xaquuqda Bini'aadamka, isla markaana uu ku xadgudbay dastuurka u yaala dalka Itoobiya, hase yeeshee mas'uul u hadlay Dowladda Itoobiya, waxa uu sheegay in Dowladda Mareykanka ay tahay dowlad marka ay gaarto danteeda fadeexooyin u raadisa hadba dowladda ay hawlgeliso.
Dhowr goobood oo ay degan yihiin Ciidamada Dowladda FKMG, gaar ahaan kuwa Milatariga ayaa la amray in ay isaga guuraan goobahaasi, waxaana goobahaasi ka mid ah dekedda weyn ee Muqdisho iyo waliba agagaarka Sayidka.
Amarkaan oo ka soo baxay maamulka Gobalka Banaadir ayaa goobaha ciidamada Milatariga lagu amray in ay ka guuraan, waxa uu maamulka gobalka Banaadir amray in lagu bedelo ciidamo ka tirsan booliiska.
Dad goob-joog ahaa ayaa waxay noo sheegeen in agagaarka Sayidka ay shalay dhufeysyo isugu jireen ciidamada Booliiska iyo kuwa Milatariga, iyadoo ciidamda Milatariga ay ad uga careysan yihiiin in goobahasi laga wareejiyo.
Ciidanka Booliiska ee la geeyey sayidka ayaa shalay ku jiray heegan buuxa, iyadoo ka cabsi qabay in ay soo weeraraan kuwa milatariga, waxaana shalay oo dhan la joojiyey dhaqdhaqaaqii gawaarida ee halkaasi.
Dhowr jeer ayaa lagu amray in ciidamada Milatariga in ay isaga baxaan gudaha Magaalada, kadib markii ay cabasho fara badan ka timid shacabka.
Xulka qaranka oo maalmahan ku jiray tababaro joogto ah kaas oo uu isugu diyaarinayo kulan ka tirsan is-reebreebka koobka adduunka oo la yeelan doonaan xulka wadanka Jabuuti.
Xulka qaranka oo haatan xareysan ayaa maalin walba wax uu sameeyaa tababaro joogto ah oo habeen iyo maalin ah, waxayna cayaartooyda xulka qaranka haatan ka kooban yihiin 26-cayaartooy, inkastoo ay yar yihiin kulamda tijaabada ah ee uu sameeyey xulka qaranka, haddna maalinta beri ah ayaa la filayaa in kulan tijaabo ah la yeesho kooxda badbaado oo ka tirsan kooxaha soo Soomaaliyeed ee ka dhisan Magaalada Muqdisho.
Xiriirka Soomaaliyeed ee K/cagta ayaa dadweynaha ku wargelinaya in ay kulankaasi ka soo qaybgalaan sidii ay indhahooda ugu arkaan xulka qarnka soomaaliya.
Xulka qaranka Soomaaliya dhowr kulan oo uu kaga qaybgalay dibadda ayuusn ka soo hoyn wax guulo ah, hase yeeshee shacabka soomaaliyeed ayaa xiligaani uga fadhiya in ay guul weyn ka soo hooyaan xulka qaranka wadanka Jabuuti oo isna ku jira diyaar la xiriira kulankaasi ee is-rebreebka koobka Adduunka oo sanadka 2010 lagu qaban doono dalka Koonfur Afrika oo isagu haatan isku diyaarinaya qabshada tartankaasi.